Allgedo.com » 2010 » December » 02
Home » Archive Daily December 2nd, 2010 Sarkaal katirsanaa Ciidanka Booliska Gobalka Nugaal oo lagu dilay degmada Burtinlle. Dec 2, 2010 Amaanka deegaanada uu kajiro maamulka Puntland ayaa faraha kasii baxaya kadib markii saacadihii lasoo dhaafay dilal kala gedisan lagu fuliyay saraakiil katirsan maamulka kajira waqooyi Bari Somaliya.
24-saacadood ayaa kasoo wareegtay markii weerar lagu qaaday Warsame Yuusuf Axmed oo katirsanaa saraakiisha amaanka Maamulka Mudug, kooxaha hubaysan ee ugaarsada saraakiisha Amaanka ayaa kusoo badanaya... Khasaara culus oo ka dhashay dagaallo iyo duqeymo maanta ka dhacay Buurhakaba iyo magaalada Muqdisho. Dec 2, 2010 Warar kala gedisan ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Buurhakaba oo ay ku dagaalameen dhinacyo hubaysan oo siyaasadda isku haya.
Maanta duhurkii ayay ciidamada AMISOM madaafiic aad uculus ku garaaceen xaafadaha dhaca waqooyiga magaalada Muqdisho xiligaas oo aysan dagaallo ka socon aagga waqooyi ee magaalada balse ay dagaaladu ka socdeen Kuliyadda Jaalle... Hogaanka Xisbul Islaam oo ka shiray Mustaqbalkooda siyaasadeed iyo suurtagalnimada in ay Dowladda KMG ah ku biiraan. Dec 2, 2010 Ururka Xisbul Islaam oo lagalasoo wareegay degmooyinkii uu ka maamulayay dalka Somaliya ayaa kulan deg deg ah ka leh xaaladaha lasoo darsay iyo Mustaqbalka Xisbiga oo hadda Mugdi sii gelaya.
Kadib markii ay Xarakada Al Shabaab kala furfurtay maamuladii Xisbul Islaam ee gobalada dalka ayna shalay la wareegtay degmada Buurhakaba ayay hogaanka sare ee Xisbul Islaam isugu yeereen shir deg deg ah.
Sida... Radio Allgedo/ Waraysiyo